Dawlada Ingiriiska oo 1.5 Miylan Gini ugu Deeqday Dalka Soomaaliya – Saraar Media
Home›All War›Dawlada Ingiriiska oo 1.5 Miylan Gini ugu Deeqday Dalka Soomaaliya
Last Updated on December 23rd, 2016 at 04:43 pm
Waaxda Horumarinta Caalamiga ah ee UK ee loo soo gaabiyo DFID ayaa 1.5 milyan oo gini ugu deeqday in lagu taageero mashruucyada kaabayaasha Soomaaliya.
Taageeradan oo la marsiinayo Bankiga Horumarinat Afrika, ayaa gacan ka geysan doonta xasiloonida Somaaliya, ayada oo diiradda lagu saari doono maal-gelin lagu sameeyo qeybaha tamarata, biyaha, nadaafadda iyo gaadiidka Soomaaliya, sida ay sheegtay dowladda UK.
Dowladda UK waxa ay sheegtay in lacagtan ay sidoo kale dowladda Soomaaliya ka caawin doonto xoojinta awoodaha horumarinta iyo maamulka kaabayaasha, sida tababar xirfadeed oo la siiyo dhallinyarada.
Madaxa Waaxda Horumarinta Caalamiga ah ee UK ee Soomaaliya Phil Evans ayaa yiri “Horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya waa ahmiyad sare, taageeradan cusub waxay buuxin doontaa waxa ka gaabta deeqaha caalamiga ah ee Soomaaliya. Caawimaaddeena waxay qeyb ka tahay dadaalka dowladda UK ee xoojinta horumarka dhaqaale ee Soomaaliya”.
Lacagta ayaa qeyb ka ah heshiiska hiigsiga cusub ee Soomaaliya iyo dalalka saaxiibada la eh ee bishii September 2013 lagu gaaray magaalada Brussels ee dalka Belgium.
Daawo: Xisbiga Wadani oo ka Hadlay Kooxda ...
Daawo: Waftigii Khaatumo oo ku Laabtey Buuhoodle ...
Barzani ee Dowlad Goboleedka Kurdistiyiinta Oo Dadkiisa Uga Baaqay Iney Isugu-soo Baxaan Codeynta Gooni Iskutaaga Kurdistiyiinta Iraq
Daawo: Golaha Wakiilada Somaliland oo Ansixiyey Go’aankii Madaxweynuhu ku kala Qaaday Doorashooyinka